कसरी ट्विटर प्रयोग गर्ने Martech Zone
कसरी ट्विटर प्रयोग गर्ने
मंगलवार, अगस्त 9, 2011 बुधबार, अक्टोबर 26, 2011 Douglas Karr
तपाईंले यो इन्फोग्राफिकमा गिल्ला गर्नु अघि, आज नै मैले एउटा ग्राहकसँग काम गरें जसलाई ट्विटरसँग काम गर्न रणनीति चाहिन्छ। मलाई लाग्छ कि यो इन्फोग्राफिकले केही ठूलो सल्लाह सहित सबै मानिसहरूका लागि केही राम्रो सल्लाह प्रदान गर्दछ। एक व्यवसाय देखि व्यापार (B2B) रणनीति को रूप मा, म मेरो ग्राहकहरु को लागी दुई अलग रणनीति सिफारिस:
पहिले, म सिफारिस गर्दछु उनीहरूको अनुसरण गर्नुहोस् नेताहरु को ट्विटर मा आफ्नो उद्योग मा, तिनीहरूसँग कुराकानी सुरू गर्नुहोस्, उनीहरूको ट्वीटहरू प्रमोट गर्नुहोस् जब अवसर आउँछ, र तिनीहरूसँग अनलाइन सम्बन्ध बनाउनुहोस्। धेरै कम व्यक्तिहरू केवल ट्विटरमा सामेल हुन सक्छन् र पर्याप्त अनुयायीहरू प्रयोग गर्न सक्दछन् तुरून्त यसको प्रयोगबाट लाभ लिनका लागि। हामी बाँकीका लागि, हामीले हाम्रा साथीहरूबाट स्वीकार गर्न आवश्यक छ र हाम्रा साथीहरूको नेटवर्कमा परिचय गराउनु आवश्यक छ। लगभग २ kk अनुयायीहरूसँग, म किन अरूलाई प्रबर्धन गर्ने कुरामा ध्यान दिन प्रयास गर्दछु! कसैले यो गर्यो जब मसँग केहि थोरै थिए!
दोस्रो, म सुझाव दिन्छु कि उनीहरूले तिनीहरूको सम्भावनाहरू अनुसरण गर्नुहोस्। जब तपाइँ ट्विटरमा तपाइँको सम्भावित आधार बढ्दै जानुहुन्छ, उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने अधिक र अधिक अवसरहरू हुनेछन्। तपाइँले कहिले थाहा पाउनु हुन्न कि जब सम्भावितलाई ट्विटरमा तपाइँको सहयोगको आवश्यक्ता पर्दछ ... उनीहरूले सोध्ने बेलामा त्यहाँ पुग्नुहोस्!
मा मानिसहरूलाई धन्यवाद ट्वीन्ड्स महान इन्फोग्राफिकको लागि!
मोबाइल अनुप्रयोग भन्दा पहिले लक्ष्यहरू विकास गर्नुहोस्
के विकास तपाईंको मार्केटिंग बजेटको हिस्सा हो?